10 Zvino Adhoni-zedheki mambo weJerusarema paakangonzwa kuti Joshua akanga atora guta reAi+ akabva ariparadza+ chose, kuti sezvaakanga aitira Jeriko+ namambo waro,+ ndizvo zvaakanga aitirawo Ai namambo waro,+ uye kuti vagari vomuGibhiyoni vakanga vaita rugare naIsraeri+ uye vakanga vachiramba vari pakati pavo, 2 akatya+ kwazvo, nokuti Gibhiyoni rakanga riri guta guru, serimwe remaguta oumambo, uye nokuti rakanga riri guru kupfuura Ai,+ uye varume varo vose vaiva vane simba. 3 Naizvozvo Adhoni-zedheki mambo weJerusarema+ akatumira shoko kuna Hohamu mambo weHebroni+ nokuna Piramu mambo weJamuti+ nokuna Jafiya mambo weRakishi+ nokuna Dhebhiri mambo weEgroni,+ achiti, 4 “Uyai kwandiri mundibatsire uye ngatirwise Gibhiyoni, nokuti raita rugare naJoshua nevanakomana vaIsraeri.”+ 5 Vakabva vaungana, vakaenda, madzimambo mashanu evaAmori,+ mambo weJerusarema, mambo weHebroni, mambo weJamuti, mambo weRakishi, mambo weEgroni, ava nemapoka avo ose, vakadzika musasa pakatarisana neGibhiyoni kuti varirwise. 6 Varume vomuGibhiyoni vakabva vatumira shoko kuna Joshua kumusasa kuGirigari,+ vachiti: “Musaregerera varanda venyu.+ Kurumidzai kuuya kwatiri mutiponese uye mutibatsire, nokuti madzimambo ose evaAmori ari kugara munzvimbo ine makomo aungana kuti atirwise.” 7 Naizvozvo Joshua akabva kuGirigari akaenda, iye nevanhu vose vehondo vaaiva navo+ nevarume vose vane simba vakashinga.+ 8 Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Usavatya,+ nokuti ndavaisa muruoko rwako.+ Hapana kana murume wavo achamirisana newe.”+ 9 Joshua akaenda kunovarwisa vakavarairwa. Usiku hwose akanga afamba achibva kuGirigari. 10 Jehovha akavavhiringidza pamberi pevaIsraeri,+ uye vakatanga kuuraya vakawanda kwazvo kuGibhiyoni,+ vakavatevera nenzira yokumukwidza weBheti-horoni, vachivauraya kusvikira kuAzeka+ nokuMakedha.+ 11 Pavakanga vachitiza pamberi pevaIsraeri vave pamutenu weBheti-horoni, Jehovha akanayisa chimvuramabwe+ chikuru pavari chichibva kudenga kusvikira kuAzeka, zvokuti vakafa. Vakafa nechimvuramabwe vakanga vakawanda kupfuura vaya vakaurayiwa nebakatwa nevanakomana vaIsraeri. 12 Panguva iyoyo Joshua ndipo paakataura naJehovha zuva rakaiswa vaAmori kuvanakomana vaIsraeri naJehovha, akati vaIsraeri vachizviona: “Zuva,+ mira paGibhiyoni,+Uye mwedzi, pabani reAijaroni.”+ 13 Naizvozvo zuva rakaramba rakamira, uye mwedzi wakamira, kusvikira rudzi rwacho rwatsiva vavengi varwo.+ Hazvina kunyorwa mubhuku raJashari+ here? Zuva rakaramba rakamira pakati pematenga uye harina kuchimbidza kuvira kwerinenge zuva rose.+ 14 Hakuna kumbova nezuva rakafanana nairoro, risati rasvika kana kuti rapfuura, pakuti Jehovha akateerera inzwi romunhu,+ nokuti Jehovha akanga achirwira+ Israeri. 15 Pashure Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakadzokera kumusasa kuGirigari.+ 16 Munguva iyi madzimambo mashanu aya akatiza,+ akavanda mubako kuMakedha.+ 17 Joshua akabva audzwa, kuti: “Madzimambo mashanu awanikwa akavanda mubako kuMakedha.”+ 18 Joshua akati: “Kungurutsirai matombo makuru pamuromo webako racho muise varume ipapo kuti vavarinde. 19 Asi imi musamira. Dzingirirai vavengi venyu, murwise vari necheshure.+ Musavabvumira kupinda mumaguta avo, nokuti Jehovha Mwari wenyu avaisa mumaoko enyu.”+ 20 Zvino Joshua nevanakomana vaIsraeri pavakanga vangopedza kuuraya vakawanda kwazvo, kusvikira vapera,+ uye vamwe vavo vakanga vapona vatiza, vakapinda mumaguta akavakirirwa,+ 21 vanhu vose vakabva vatanga kudzokera kumusasa, kuna Joshua, kuMakedha norugare. Hapana kana murume akambosimudzira vanakomana vaIsraeri rurimi rwake.+ 22 Joshua akabva ati: “Vhurai muromo webako, mubudise madzimambo mashanu aya mubako muuye nawo kwandiri.” 23 Vakaita saizvozvo, vakabudisa madzimambo mashanu aya mubako vakaenda nawo kwaaiva, mambo weJerusarema,+ mambo weHebroni,+ mambo weJamuti, mambo weRakishi,+ mambo weEgroni.+ 24 Pavakangouya nemadzimambo aya kuna Joshua, Joshua akashevedza varume vose vaIsraeri akati kuvatungamiriri vevarume vehondo vaakanga aenda navo: “Uyai mberi. Tsikai seri kwemitsipa yemadzimambo aya.”+ Naizvozvo vakauya mberi vakatsika seri kwemitsipa yavo.+ 25 Joshua akati kwavari: “Musatya kana kuvhunduka.+ Shingai, musimbe, nokuti Jehovha achaitira vavengi venyu vose vamuri kurwa navo saizvozvi.”+ 26 Pashure paizvozvo Joshua akavabaya, akavauraya, akavaturika pamatanda mashanu, uye vakaramba vakarembera pamatanda acho kusvikira manheru.+ 27 Zvino panguva yokuvira kwezuva Joshua akarayira, vakavaburutsa pamatanda+ acho, vakavakanda mubako ravakanga vambovanda. Vakabva vaisa matombo makuru pamuromo webako racho—aripo kusvikira nhasi. 28 Joshua akatora Makedha+ zuva iroro akariparadza nomuromo webakatwa. Kana ari mambo waro, akamuparadza chose iye nemweya yose+ yakanga iri mariri. Haana kusiya kana mumwe chete akapona. Naizvozvo akaitira mambo weMakedha+ sezvaakanga aitira mambo weJeriko. 29 Zvino Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakapfuura vachibva kuMakedha vachienda kuRibna, vakarwisa Ribna.+ 30 Naizvozvo Jehovha akariisawo namambo waro muruoko rwaIsraeri, vakariparadza pamwe chete nemweya yose yakanga iri mariri nomuromo webakatwa. Havana kusiya kana mumwe chete akapona mariri. Nokudaro vakaitira mambo waro sezvavakanga vaitira mambo weJeriko.+ 31 Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakabva vapfuurira kuenda kuRakishi+ vachibva kuRibna vakadzika musasa pakatarisana naro vakarirwisa. 32 Naizvozvo Jehovha akaisa Rakishi muruoko rwaIsraeri zvokuti vakaritora pazuva rechipiri, vakariparadza pamwe chete nemweya yose yakanga iri mariri nomuromo webakatwa,+ maererano nezvose zvavakanga vaitira Ribna. 33 Panguva iyoyo Horamu mambo weGezeri+ akaenda kuti abatsire Rakishi. Naizvozvo Joshua akamurwisa iye nevanhu vake zvokuti haana kumusiyira kana mumwe chete akapona.+ 34 Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakabva vapfuurira kuenda kuEgroni+ vachibva kuRakishi, vakadzika musasa pakatarisana naro, vakarirwisa. 35 Vakaritora zuva iroro vakatanga kuriparadza chose nomuromo webakatwa, vakaparadza mweya yose yakanga iri mariri zuva iroro, maererano nezvose zvavakanga vaitira Rakishi.+ 36 Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakabva vaenda kuHebroni+ vachibva kuEgroni vakatanga kurirwisa. 37 Vakaritora, vakariparadza namambo waro nemataundi aro ose nemweya yose yakanga iri mariri nomuromo webakatwa. Haana kusiya kana mumwe chete akapona, maererano nezvose zvaakanga aitira Egroni. Naizvozvo vakariparadza chose pamwe chete nemweya yose yakanga iri mariri.+ 38 Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakazodzoka kuDhebhiri,+ vakatanga kurirwisa. 39 Akaritora namambo waro nemataundi aro ose, vakariparadza nomuromo webakatwa nokuparadza chose mweya yose yakanga iri mariri.+ Haana kusiya kana mumwe chete akapona.+ Sezvaakanga aitira Hebroni, ndizvo zvaakaitirawo Dhebhiri namambo waro, uye sezvaakanga aitira Ribna namambo waro.+ 40 Joshua akaparadza nyika yose yenzvimbo ine makomo+ neNegebhu+ neShefera+ nenzvimbo dzakatenuka+ nemadzimambo adzo ose. Haana kusiya kana mumwe chete akapona, uye zvinhu zvose zvaifema+ akazviparadza chose,+ sezvakanga zvarayirwa+ naJehovha Mwari waIsraeri. 41 Joshua akavaparadza kubvira kuKadheshi-bhaneya+ kusvikira kuGaza+ nenyika yose yeGosheni+ kusvikira kuGibhiyoni.+ 42 Joshua akatora madzimambo aya ose+ nenyika dzawo panguva imwe chete, nokuti Jehovha Mwari waIsraeri ndiye akanga achirwira+ Israeri. 43 Pashure paizvozvo Joshua nevaIsraeri vose vaaiva navo vakadzokera kumusasa kuGirigari.+